DAAWO: Wasiir Odowaa oo taageero lacageed u diray nin ku xanuunsan Magaalada Burco - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. DAAWO: Wasiir Odowaa oo taageero lacageed u diray nin ku xanuunsan Magaalada Burco - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odowaa) ayaa deeq lacageed oo samafal ah u diray
nin aan miyir qabin oo ku tabaaleysan magaalada Burco ee Gobolka Togdheer, kadib markii lagu baahiyay muuqaalkiisa baraha bulshada.
Wasiir Odowaa ayaa la xiriiray weriye C/maalik Coldoon oo shaaciyay deeqda uu wasiirka Soomaaliyeed gaarsiiyay ninkaas Cabdalla Aadan Maxamed oo muddo 20 sano ah ay xanuunka madaxda u wehlisay dayac.
HOOS KA DAAWO WERIYE COLDOON OO KA HADLAYA
Wasiirka arimaha gudaha soomaaliya oo kaalmo soo gaadhsiiyey w…Wasiirka arimaha gudaha soomaaliya oo kaalmo soo gaadhsiiyey walaal ku dhiban Burco
Posted by Cabdimaalik muuse coldoon on Monday, 1 August 2016
Previous articleC/weli Gaas oo abaalmarin lacageed qiime leh guddoonsiiyay Ciyaartoyda Xulka Puntland
Next articleProf. Jawaari oo loo diyaarinayo Madaxweyne KMG ah & Xasan Sheekh oo waagu ku baryay [WARBIXIN]